KENYA OO XUKUN LACAG AH KU RIDAY AFAR MUWAADINIIN OO SOMALI AH - iftineducation.com
KENYA OO XUKUN LACAG AH KU RIDAY AFAR MUWAADINIIN OO SOMALI AH
iftineducation.com – Dowladda Kenya ayaa waxa ay xukun ku riday Afar qof oo muwaadiniin Somaliyed ah, kuwaasi oo doonaayay inay Diyaarad ka raacaan Magaalada Mandheera ee dalka Kenya, si ay u tagaan Magaalada Nairobi.
Afartaan ruux oo isugu jira Gabdho iyo Wiilal ayaa la sheegay in Kenya ay ku xukuntay inay bixiyaan lacag dhan 5.5 million oo Shillinka Kenya ama Xabsi min 10-sano ah.
Muwaadiniintaasi oo magacyadooda lagu kala sheegay Zakariya C/llaahi Axmed, C/qaadir Shariif Cabdinuur, Ubax C/raxmaan Xasan iyo Faadumo Canshuur ayaa la sheegay in isbuucii hore lagu qabtay iyagoo Garoonka Diyaaradaha Mandera ka raaci lahaa Diyaarad ku soo jeeday magaalladda Nairobi.
Boliska Mandera ayaa ku soo oogay dadkaasi inay wateen Fiisooyin Kenyan oo aysan iyaga lahayn iyo inay Sharci la’aan ku joogeen Kenya.
Eedeysanayaasha waxay sheegeen in lagu khiyaaanay Fiisaha, loona sheegay inay ku tegi karaan Nairobi, waxayna dhamaantooda ka codsadeen Maxkamadda Mandera in la cafiyo.
C/weli Gaas oo Magacaabay 10 Xil oo layaab leh kuna cusub Jagooyinka Soomaaliya